Uyenza njani i-Gmail yakho? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Uyenza njani i-Gmail yakho?
Meyi 12, 2021 0 IiCententarios 417
I-Gmail yenye yeenkonzo esetyenziswa kakhulu kwihlabathi kwaye yinkonzo ngaphandle kweendleko ezongezelelweyo ezinika ukufumaneka lula kuso nasiphi na isixhobo.
Xa usebenzisa i-imeyile yakho elektroniki, unayo
Guqula imvelaphi, ifonti kunye nomxholo kwiGmail: Ukwenza imvelaphi kunye nokwenza kube ngokwakho kwiGmail, cofa "kwiifoto zam", khetha inkonzo yokulayisha kaGoogle kunye nomxholo weGmail uza kuvela ngokuzenzekelayo. Enye indlela yomfanekiso ongasemva ukhetha imvelaphi yesicatshulwa ukuyenza mnyama kwiikona okanye uphawule umphumo wokufiphala.
Ukuba nomxholo sinethuba lokuba sinokwenza utshintsho kwaye silungiselele kwaye sifikelele kwicandelo loMxholo, emva koko usete umxholo. Esizakuyibona ifestile apho sikhetha khona phakathi kwezihloko ezivela kwinkonzo kaGoogle.
Kwimeko yokutshintsha ubungakanani beleta, i-Gmail ayinalo msebenzi, nangona kunjalo kunokwenzeka ukuba iyafana "noxinano lomxholo". Ngakolunye uhlangothi, i-Gmail ikuvumela ukuba wenze ngokwezifiso uhlobo lohlobo, umbala, ubungakanani, ifonti esetyenziswa xa ubhala okanye uphendula.
Guqula umthombo kwi-iPod okanye kwi-iPhone.
Yiya kwiGmail kwi-iPod okanye kwi-iPhone.
Cinezela "Bhala" ezantsi ekunene.
Cofa kabini umxholo oza kuwufomatha.
Khetha ukhetho ifomathi oyifunayo: nokuba ngumaluki, ikrwada, ikrwelelwe kunye nezinye.
Guqula ubungakanani befonti.
Isikrini kwaye ukhanye.
Guqula ifonti kwi-Android.
Ir usetyenziso lweGmail kwithebhulethi ye-Android okanye kwifowuni.
Cinezela "Qamba"Ezantsi ekunene.
Yenza umxholo wesiko kwiGmail.
Cofa izixhobo, ngasekunene kwesikrini.
Ibhanti ukhetho lwe "Themes".
Khetha "Iifoto Zam."
Khetha into oyifunayo: Iifoto. Okufakiwe, ifoto esandula ukukhethwa, layisha ifoto okanye i-URL yefoto ofuna ukuyenza ibe yeyakho.
cofa kwi "Khetha"
Khetha imvelaphi makukhanye okanye kube mnyama.
Imowudi emnyama yeGmail.
Yiya kwimixholo "Useto olukhawulezayo"
Yiya kwizihloko "Bona zonke iisetingi."
Imixholo imibalabala, ke ngoko, kuya kufuneka siye ebumnyameni kwaye ngenxa yoko sinokubona kuqala ukuba siyayigcina, ukuba ayisiyiyo le siyifunayo, siza kucinezela ukurhoxisa kwaye kwakhona sibuyela kumxholo owawumiselweyo .
Yongeza iqhosha lokuncamathisela iifayile ezivela ku-Facebook, Instagram, kwiDropbox, njl
Kunamafu eGmail lulwandiso lweGoogle Chrome, umsebenzi wayo kukongeza iqhosha eligcinwa kuzo zonke iifayile kwilifu ezibandakanya ezo zisuka kwinethiwekhi yoluntu kwaye ukuba ungazincamathisela ukugcina indawo, ixesha kunye nomsebenzi.
Uyenza njani iakhawunti yeGmail?
Yintoni imisebenzi yeGmail?